ဒီမိုကရေစီအမှိုက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒီမိုကရေစီအမှိုက်များ
Posted by captainamerica on Jun 9, 2011 in Copy/Paste | 11 comments
ဒီမိုကရေစီစနစ် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုသည်မှာ အုပ်ချုပ်သောသူများနှင့် အများပြည်သူတို.ကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်လျှင် အင်မတန်အကျိုးရှိသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ယောက်၏အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အ၀ပေးနိုင်စွမ်းရှိသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုအ ခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချတတ်လျှင်အဖိုးတန် ဒီမိုကရေစီလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါ
သည်။မိမိ၏အခွင့်အရေးကိုသာရှေ.တန်းတင်လျှက်လူ.ပတ်ဝန်းကျင်လူအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုဆန်.ကျင်လျှင်လူ. အမှိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ မန်းဂေဇတ်မှာ မြန်မာအမျိုးကောင်း
သားသမီးတို.ဖြင့်ဖွဲ.စည်းတည်ဆောက်ထားေ သာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ယူဆထားပါသည်။ မိမိတို.နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုဖြင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသောအယူအဆများကိုသာလက်ခံနိုင်
ဖွယ်ရာရှိ၏။ အများမှလုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိဟု ယူဆထားသော အကြောင်းအရာများကိုထပ်ခါထပ်ခါဖော်
ထောက်ခံပါတယ် captainamerica ရေ။ လမ်းမပေါ်ဆေးရိုးလှမ်းပြီး လွတ်လပ်ရေးကို ပုံဖော်သလို ဖြစ်နေတယ်။
ဘယ်အကြောင်းအရာကို ထပ်ခါထပ်ခါဖော်ပြနေတယ် လို့ ရဲရဲသာပြောပစ်လိုက်ပါ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းရှင်း ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်လုပ်စမ်းပါ။
ဒီမိုကရေစီ အော်ပြီး အများ လက်မခံတဲ့ ဆန္ဒတွေ လာလာ ထုတ်ပြနေတာတော့ အတော်မျက်နှာပြောင်တိုက်လွန်းတယ်။
လူကွယ်ရာမှာ နှစ်ပါးသွားသင့်တဲ့ ကိစ္စ လူအများရှေ့မှာ လာလုပ်ပြရမှ ပျော်ရွင်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို အမြင်မတော်ဘူး ဆိုပြီး လူကွယ်ရာ ပြန်ပို့သင့်သလော။
ကိုယ်ပိုင် အခွင့် အရေး ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် အများ မကြိုက်ရင် လာမပြောနဲ့..
ရွာပြင် ထုတ်တယ် ဆိုတဲ့ စကား တခြား မဟုတ်ဘူး.. အများနဲ့ တယောက် ဖြစ်နေလို့..
ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေး ဆိုရာမှာ ကိုယ်လည်းပိုင်သလို သူများပါ တပြိုင်တည်းပိုင်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မြင်းကိုယ်စိုင်းဆိုပေမယ့် စစ်ကိုင်းရောက်အောင် မသွားသင့်ပါ။ လူညီတိုင်း ဤကို ကျွဲလို့ မဖတ်ပါနဲ့ ။ ဤမှန်းသိရက်နဲ့ တော့ ဤ ဟာ ဤပဲပေါ့။ ဤမှန်းမသိရင်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီမှာကိုပဲ လူနည်းစုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ us center ကနေ မြန်မာပြန်ထုတ်တဲ့ “ခြံစည်းရိုးအတွင်းကလူ” ထဲမှာ ဖတ်ဘူးပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ တို့ လူ့ အခွင့် အရေး တို့ ဆိုတာ သေချာ မသိပေမယ့် ဒီပိုစ် လေးကို ဖတ်ပြီး အတွေးတခုရလိုက်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီတို့ လူ့အခွင့် အရေးတို့ ဆိုတာ ကောင်းကောင်းအသုံးမချတတ်ရင် မကောင်းတာလုပ်ဖို့ လွတ်လပ်သွားသလို လဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
government by the people လို့ဆိုလိုတာပါ..
တစ်ကယ်တော့.. အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူလူထုက အုပ်ချုပ်သူကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီး..အုပ်ချုပ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ခိုင်းတယ်.. အုပ်ချုပ်တာကို မနှစ်သက်ရင်.. အုပ်ချုပ်သူကို ပယ်ချပြီး.. နောက်ထပ်..ထပ်ရွေးတယ်..
ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ.. ပြည်သူက အုပ်ချုပ်တာကို ခေါ်တာပါ..
အဲဒီ ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူလူထုက အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ရတာမှန်ပေမယ့်..
တာဝန်လည်း အပြည့်အ၀ရှိပါတယ်.. (အုပ်ချုပ်သူကို ကိုယ်က ရွေးရတာမို့)
မည်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာ မဆို.. သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဖြစ်တည်မှု အရ.. ဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ရှိတာကြောင့်..
တရားဝင်တယ်. .တရားမ၀င်ဘူး ဆိုတာနဲ့ တိုင်းတာမှာဖြစ်ပြီး..
အများပြည်သူကို အနှောင့်အယှက်ပြုမိရင်တော့.. သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ..အရေးယူခြင်းခံရမှာပါ..
ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုရာတွင်.. အုပ်ချုပ်သူအစိုးရသည် အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူရဲ့ သဘောဆန္ဒအရ..ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိသည်မှ လွဲပြီး..
အခြားသော အပြုအမူများသည်.. သက်ဆိုင်ရာ… ဥပဒေ..နည်းဥပဒေ.. လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ..
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှာဖြစ်သောကြောင့်.. ရေးဆွဲထားသော ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေအတိုင်း.. ပြဌာန်းချက်များအတိုင်း.. လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးဟုခေါ်သော မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်သည်.. နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့ ကိုထိပါးနှောင့်ယှက်ပါက..ထိပါးနှောင့်ယှက်နိုင်သည်ဟု ယူဆပါက.. အရေးယူအပြစ်ပေးခံရပါမည်။
ဥပမာ.. မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဟုဆိုပြီး.. မိမိသိထားသော နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်များကို ပေါက်ကြားစေပါက.. နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေအရ.အရေးယူခံရပါမည်။
အမျိုးဂုဏ်..ဇာတိဂုဏ်မြင့်မားရေးကို ထိခိုက်စေသော အပြုအမူမှန်သမျှသည်…
ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်း အရေးယူ အပြစ်ပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေး မျက်နှာစွပ်ပြီး အယောင်ဆောင်အော်တတ်ကြပါတယ်။
မူရင်းစာတင်တဲ့..ကိုရင်. ပြောချင်တာက.. ဂေး၊လက်စ်ဘီယန်(Homosexuality (lesbian and gay), bisexuality, and transsexualism (“LGBT”)အတွက်လို့ထင်ပါတယ်..။
ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြင်.. မြန်မာတွေအများစုသိသင့်တဲ့.. ဒီမိုကရေစီဖွင့်ချက်လေးတခု..အောက်မှာ.. U.S. Department of State publication, Principles of Democracy စာအုပ်ကကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
လိုရင်းပြောချင်တာက.. “ဒီမိုကရေစီမှာ.. အများစုဆန္ဒအတိုင်းလုပ်(အုပ်ချုပ်)ရပေမဲ့… အနည်းစုဆန္ဒ(အခွင့်အရေး)ကိုလည်း..အသိအမှတ်ပြု.. လေးစား(ကာကွယ်) ပေးရပါတယ်..”
• Among the basic human rights that any democratic government must protect are freedom of speech and expression; freedom of religion and belief; due process and equal protection under the law; and freedom to organize, speak out, dissent, and participate fully in the public life of their society.
လူအများစုမှာလဲအများစုအခွင့်အရေးရှိတယ်လေ။ အနည်းနဲ.အများ ဘယ်လို ယှဉ်ကြဦးမှာတုန်း။
ခက်ပနော်…..ပြောကြပါအုန်း ရွာသူရွာသားတို.ရေ ..Fight ကြ ပါ ။ အဖိုးတန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ.ပဲ
ပါ……. အင်မတန် အင်မတန် ကိုရွံလွန်းလို.ပါ………….ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ.မှခံစားပေးလို.မရနိုင်ပါ
ဒဲ့ပြောလိုက်တာပါ…. Gay အခွင့်အရေးဆိုတာလာပြောကြပါ……. ရှင်းကြည့်တာပေါ့..
“ဒီမိုကရေစီမှာ.. အများစုဆန္ဒအတိုင်းလုပ်(အုပ်ချုပ်)ရပေမဲ့… အနည်းစုဆန္ဒ(အခွင့်အရေး)ကိုလည်း..အသိအမှတ်ပြု.. လေးစား(ကာကွယ်) ပေးရပါတယ်..”
ခက်တာက.. အဲဒီ အနည်းစုရဲ့ဆန္ဒက.. အများစုရဲ့..ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အခါ.. ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်နေတဲ့ အခါ… အများစုကလက်မခံနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ.. အဲဒီ အနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒကို ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး…
သူ့အခွင့်အရေး..နဲ့သူရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့်..ရောဂါကိုတော့ ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး..
ကဒါဖီက သူလုပ်ချင်တာကိုလုပ်တာပါ.. သူ့မှာ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. လစ်ဗျားပြည်သူတွေအတွက်.. အဆင်မပြေနိုင်လို့.. အဲဒီ ဒီမိုကရေစီ အမေရိကန်က စစ်ဝင်တိုက်တာပါ..
U.S. Department of State publication, Principles of Democracy ဆိုတာ..လူတွေရေးထားတာပါ..
အနောက်တိုင်း အတွေးအခေါ်တွေက..အများအားဖြင့်.. နောက်တစ်ခု ထွက်မလာခင်အထိတော့မှန်နေလေ့ ရှိကြပါတယ်..
လက်တွေ့ကျတယ်..လို့ပြောတဲ့.. နံမည်ကြီး သိပ္ပံ ကအစပေါ့.. တွေ့ရှိမှု အသစ်ဖြစ်ပေါ်မလာခင်အထိ.. မှန်နေလေ့ရှိတာပါ..
ဟိုတလောကလည်း.. အာဆင်းနစ်.ထဲမှာ သက်ရှိတွေ့တယ်လို့ပြောနေပြန်ပါပြီ… အရင်က မရှိပါဘူး..
ဒါပေမယ့်.. အဲဒါက ရောဂါတစ်ခုလို..ပြန့်ပွားလာမယ်… ပတ်ဝန်းကျင်ကို နှောင့်ယှက်လာမယ်… အန္တရာယ်ပြုလာမယ်ဆိုရင်တော့..
အဲဒီရောဂါကို အလျှင်အမြန်ကုဖို့လိုအပ်နေပါပြီ… အမြစ်ပြတ်ကုရမှာပါ..
(Homosexuality (lesbian and gay), bisexuality, and transsexualism (“LGBT”) တွေရဲ့.. ဆန္ဒ ကိုနားလည်ပါတယ်.. freedom to organize ပါ.. ကျုပ်တို့ကို၊ ကျုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျုပ်တို့မိသားစုကို လာမစည်းရုံးပါနဲ့..
freedom to speak out, ပါ.. ကျုပ်တို့ နားတွေကိုတော့ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့.. freedom to dissent ပါ.. ကျုပ်တို့ရည်မှန်းချက်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်မိပါစေနဲ့.. freedom to participate fully in the public life of their society. ပါ.. not our society.. ပါ..
စာအုပ်ကြီးသမား..ပညာတတ်များကို လေးစားစွာ ပြောပြလိုတာက..
သူများ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကြီးအတိုင်း (ပြီးပြည့်စုံမှုရှိတယ်..မှန်ကန်တယ်လို့) ယူဆမယ်.. လိုက်နာမယ်… ..ဆိုရင်တော့ .. လိုက်နာသူရဲ့ သဘောဆန္ဒ(အခွင့်အရေး)ပါ.. လေးစားပါတယ်..ကာကွယ်ပါတယ်..
ဒါကြောင့်..မိမိအိမ်ထဲကို.(မိမိအိမ်ရဲ့ အနီးအနားကို).. မြွေပွေး.. တွေဝင်လာရင်.. မောင်းမထုတ်ပါနဲ့… သူတို့ဆန္ဒ(အခွင့်အရေး) ကိုလေးစားပါ.. ကာကွယ်ပါ.. အဲဒီ မြွေပွေးတွေ..ထပ်ပေါက်လာရင်လည်း လက်ခံထားပါ. မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့ …. မိသားစုကို အန္တရာယ်ပြုလာရင်လည်း.. လက်ခံပေးလိုက်ပါ..အဲဒါသူတို့အခွင့်အရေးပါ.. မိမိရဲ့ မိသားစုသာ သေသွားပါစေ…… အဲဒီအခါကျမှ.. တရားစွဲဆိုပါ.. မိမိသဘောအလျောက် လက်တုံ့ပြန်ခြင်း မပြုရပါ….
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မြွေပွေးမှ.. ထိုက်သင့်သော အပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူပါလိမ့်မည်…….
မူမှန်စိတ်.. မူမှန် အတွေး..မရှိသူများသည်..
မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သည်ဟု ယူဆပါသောကြောင့်..
ထိုထို အခြင်းအရာများအား… အပြင်းအထန်..ရှုတ်ချပါသည်…ကန့်ကွက်ပါသည်..
“ဒီမိုကရေစီမှာ.. အများစုဆန္ဒအတိုင်းလုပ်(အုပ်ချုပ်)ရမှာ ဖြစ်ပါသောကြောင့်..”
အများစုဆန္ဒအရ… အပြင်းအထန်..ဆန့်ကျင် နှိမ်နင်းသင့်ပါကြောင်း……